ဝန်ဆောင်မှုများ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ - ADC စွမ်းအင်
1 ။ definitions
1.1 ဖော်ပြပါအသုံးအနှုန်းများသည် အခြားအကြောင်းအရာများ လိုအပ်ခြင်းမရှိပါက အောက်ပါအဓိပ္ပာယ်များ ရှိရမည်- "ADC Energy Ltd" သို့မဟုတ် "ADC" သည် ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် Client မှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည်။
“ADC Energy Ltd. ဝန်ထမ်း”- ဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် ADC မှ ညွှန်ကြားထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်(များ)။ ဤပုဂ္ဂိုလ်(များ)သည် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သောကြောင့် ADC ကိုယ်စား စာရွက်စာတမ်းများကို လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အခွင့်အာဏာမရှိပါ။
"Client"- ဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ရန် ADC ကို တောင်းဆိုပြီး ညွှန်ကြားသည့် ပါတီ။
"ဝန်ဆောင်မှုများ/အလုပ်"- ဝန်ဆောင်မှုများ/လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော စက်ကိရိယာများနှင့်အတူ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများမှ လိုအပ်သော စက်ကိရိယာများနှင့်အတူ ပံ့ပိုးမှု သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်များ အပါအဝင် သို့မဟုတ် သီးခြားစီ ပေးအပ်သည့် ပံ့ပိုးမှု သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်များ ပါဝင်သော အစီရင်ခံစာများ၊ "အလုပ်၏နယ်ပယ်" သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Client မှတောင်းဆိုထားသည့်အလုပ် သို့မဟုတ် ADC Energy Ltd မှလက်ခံထားသော client ထံမှအခြားညွှန်ကြားချက်များ။ ဤဝန်ဆောင်မှုများသည် client ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအချိန်နှင့်တည်နေရာများဖြစ်လိမ့်မည်။ ဝန်ဆောင်မှုများတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စာရင်းစစ်များ၊ တူးစင်နှင့် BOPE စစ်ဆေးမှုများ၊ HSE စာရင်းစစ်များ၊ ရေတွင်းစစ်ဆေးမှုများ၊ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုများ၊ ကျဆင်းသွားသော အရာဝတ္ထုဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာမှုအာမခံချက်အပြင် အခြားသော စစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှု အက်ပ်လီကေးရှင်းများပါ၀င်ပါသည်။
“ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များ”- ဝန်ဆောင်မှုများကို သက်ဆိုင်သူများ၏ လက်မှတ်ဖြင့် သဘောတူညီပါက ဤစံစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများဖြင့် အုပ်ချုပ်သော သီးခြားသဘောတူညီချက်များတွင် ဖော်ပြရပါမည်။
"Client Indemnified Parties"- မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ ယူနစ် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ၏ ပိုင်ရှင်များနှင့် အော်ပရေတာများသည် ADC Energy Ltd. မှ စစ်ဆေးပြီး/သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်ရမည့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သုံးစွဲသူကိုယ်စား၊ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များနှင့်၊ လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာများ။
"အန္တရာယ်များသော စီမံကိန်းများ"- ADC မှ သတ်မှတ်နိုင်သော အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပရောဂျက်များသည် ငွေကြေး သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဆင့်၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းမှု၊ သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်များပါရှိသည့် ပုံမှန်ထက်ပိုသော အန္တရာယ်အဆင့်ကို ခံယူရန်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ပရောဂျက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပုံမှန်လက်ခံနိုင်သော အန္တရာယ်အဆင့်ကို ကျော်လွန်သွားပါ။
2. ဤအခြေအနေများကို အသုံးချခြင်း။
2.1 ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ADC Energy Ltd မှထည့်သွင်းထားသော အဆိုပြုချက်များ၊ ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့် စာချုပ်များအားလုံးတွင် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးကြားတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော သဘောတူညီချက်မရှိပါက၊ ADC မှ ပံ့ပိုးပေးသော အဆိုပြုချက်ကို Client မှ သဘောတူသောအခါတွင် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖောက်သည် အဆိုပြုချက်လက်ခံခြင်းအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော သဘောတူညီချက်မရှိပါက ADC Energy Ltd. ဘက်မှ မည်သည့်အလုပ်မျှ စတင်ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။
2.2 နှစ်ဖက်စလုံးမှ စာဖြင့် အတိအလင်းသဘောတူထားခြင်းမရှိပါက ADC Energy Ltd. မှ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှုကို ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံသည်ဟု မှတ်ယူခြင်းမပြုရ။
2.3 ဤအခြေအနေများ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် တရားမဝင်ကြောင်း သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်း သက်သေပြပါက သို့မဟုတ် ပျက်ပြယ်သွားပါက ၎င်းသည် ဆက်လက်အသက်ဝင်မည့် ဤအထွေထွေစည်းမျဉ်းများနှင့် အခြားပြဋ္ဌာန်းချက်များအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။
2.4 ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ADC Energy Ltd. နှင့် ADC နှင့် သို့မဟုတ် Client ဖြင့်ဖြစ်စေ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကို စာချုပ်ခွဲထားသည့် မည်သည့်သဘောတူညီချက်များနှင့်မဆို သက်ဆိုင်ပါသည်။
2.5 ADC Energy Ltd. မှ ပြုလုပ်သော အဆိုပြုချက်များအားလုံးသည် အဆိုပြုချက်တွင် အခြားနည်းဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက ထုတ်ပြန်သည့်နေ့စွဲပြီးနောက်2လတာကာလအတွင်း အကျုံးဝင်ပါသည်။
2.6 အလုပ်နယ်ပယ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ပရောဂျက်၏ကြာချိန်အတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။
3 ။ ကန့်သတ်
3.1 ADC သည် ဖောက်သည်များထံမှ ညွှန်ကြားချက်များ၊ အချိန်ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ စသည်တို့ကို ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်သည်ဟု မှတ်ယူထားသည့် အထက်ဖော်ပြပါ ယေဘုယျသဘောကို ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ သက်ဆိုင်သည့် အခြေအနေအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ADC မှ သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ယင်းအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ လက်တွေ့ကျနိုင်သမျှ အပြည့်အဝ ဖောက်သည်ထံ အစီရင်ခံရမည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် ADC သို့ အမြန်သဘောတူညီချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက မည်သည့်ယူနစ် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာရှိ အဖွဲ့အစည်းမဆို ချွတ်ယွင်းချက်ကင်းကင်း သို့မဟုတ် သီးခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း သို့မဟုတ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ကို အာမခံချက်မပေးရ။
3.2 ADC မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတိုင်းတွင်၊ ဝန်ဆောင်မှု/လုပ်ငန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ADC တွင် အချိန်မရှိခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ ယူနစ် သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာများ၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို စစ်ဆေးခြင်း/အကဲဖြတ်ခြင်း မပြုနိုင်သည့် အတိုင်းအတာအထိ ရှင်းလင်းချက်ပါရှိပါသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်း၊ ယူနစ် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုအတွက် အကြံပေးရန် အထူးကုအတိုင်ပင်ခံများကို မပါဝင်ဘဲနှင့် ဤနေရာတွင်ပါရှိသော အခြားပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ - ADC သည် မပြီးမြောက်နိုင်သော ဤလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မည်သည့်ကိစ္စရပ်နှင့်မဆို တာဝန်မကင်းပါ။
3.3 ADC Energy Ltd. မှ ထုတ်ပြန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Client နှင့် ADC အကြား သီးခြားသဘောတူထားခြင်းမရှိပါက တိကျသောပရောဂျက်အတွက် ဖောက်သည်တစ်ဦးတည်း၏အကျိုးအတွက်ဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး ADC မှ ပေးထားသည့် အစီရင်ခံစာပါ အကြောင်းအရာများအတွက် မည်သည့်တာဝန်ယူမှုမှ လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ အခြားမည်သည့်ပါတီကိုမဆို။
4. အပြန်အလှန် နစ်နာကြေးများ
4.1 ADC သည် ဝန်ထမ်း၊ အစေခံ၊ အေးဂျင့်၊ ကန်ထရိုက်တာ သို့မဟုတ် ဖိတ်ခေါ်သူ၏ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု သို့မဟုတ် သေဆုံးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် နစ်နာကြေးများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ပျက်စီးမှုများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးကို ဖောက်သည်နှင့် နစ်နာကြေးပေးသည့်ပါတီများအား အန္တရာယ်မရှိစေဘဲ လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ADC နှင့် ADC ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများ၊ အစေခံများ၊ အေးဂျင့်များ သို့မဟုတ် ဖိတ်ကြားထားသူများ ADC ၏ စွမ်းဆောင်မှုရလဒ်ကြောင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း။
4.2 Client သည် ADC နှင့် ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများ၊ အစေခံများ၊ အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦး၏ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် သေဆုံးမှုတို့ကြောင့် နစ်နာကြေးများ၊ နစ်နာကြေးများ၊ နစ်နာကြေးများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးကို နစ်နာကြေးပေးရန် နှင့် ADC နှင့် ၎င်း၏ဝန်ထမ်း၊ Client သို့မဟုတ် Client ၏ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဖိတ်ကြားထားသူ သို့မဟုတ် Client Indemnified Parties သို့မဟုတ် Client သို့မဟုတ် Client ၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ဝန်ထမ်း၊ အစေခံများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကန်ထရိုက်ခွဲများ သို့မဟုတ် ဖိတ်ကြားထားသူများ သို့မဟုတ် ရလဒ်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖောက်သည် နစ်နာကြေးပေးသည့်ပါတီများသည် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ADC သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများ၊ အစေခံများ၊ အေးဂျင့်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများ သို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်တာခွဲများမှ ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်စေ ADC ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ADC ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေခြင်း မရှိပါ။
4.3 အထက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖောက်သည် သို့မဟုတ် ADC (ကန်ထရိုက်ပါတီများ) သို့မဟုတ် နစ်နာမှု၊ သေဆုံးမှု၊ ပျက်စီးမှု၊ သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဖောက်သည် သို့မဟုတ် ADC (စာချုပ်အဖွဲ့များ) ၏ တမင်တမင် မှားယွင်းစွာ ပြုမှုခြင်း သို့မဟုတ် ပေါ့ဆမှုဖြစ်ပွားပါက အဆိုပါအဖွဲ့များသည် တာဝန်ရှိပြီး တာဝန်ရှိပါသည်။ ခုံသမာဓိ သို့မဟုတ် တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်လျှင်။
4.4 ဤသဘောတူညီချက်တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်စုံတစ်ရာရှိသော်လည်း၊ ဤအပိုဒ်အောက်ရှိ ပါတီများ၏ တာ၀န်နှင့် တာဝန်များသည် သဘောတူညီချက်၏ သက်တမ်းအတွင်း သို့မဟုတ် ယင်းနောက်မှ ပေါ်ပေါက်လာသည့် တောင်းဆိုချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤသဘောတူညီချက်အား ရပ်စဲခြင်းမှ ရှင်သန်ရမည်။
4.5 Client Indemnified Parties များတွင် စစ်ဆေးခံရန်၊ စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို စစ်ဆေးရမည့် ပိုင်ရှင်များ ပါ၀င်သည် ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို client နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး မစစ်ဆေးမီ၊ စာရင်းစစ်ခြင်း စသည်တို့ကို မလုပ်ဆောင်မီတွင် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ထားသော်လည်း၊
5. အန္တရာယ်များသော ပရောဂျက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
5.1 ADC သည် အန္တရာယ်များသော ပရောဂျက်များကို ကနဦးဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက် Client မှပေးသော အချက်အလက်ပေါ်တွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မူတည်ပါသည်။ ADC နှင့် ၎င်း၏အာမခံကုမ္ပဏီမှ သက်သေခံခွင့်ပြုရန် ဤအချက်အလက်များ ပြည့်စုံပြီး လုံလောက်ရပါမည်။ ပါ၀င်နိုင်သော အန္တရာယ်အဆင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိလျှင် Client မှ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏ ADC Management ကို သတိပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ADC သည် ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စေရန် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
5.2 ကိစ္စရပ်တိုင်းတွင် ADC ရှာဖွေတွေ့ရှိချက် သို့မဟုတ် အစီရင်ခံစာကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် Client သည် ၎င်းတို့၏ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။
6 ။ performance
6.1 Client နှင့် ADC အကြား သဘောတူညီထားသော စီမံကိန်း၏ အချိန်နှင့် အတိုင်းအတာနှင့် စပ်လျဉ်းသော ကတိကဝတ်များအားလုံးကို စာဖြင့် အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်များကို သစ္စာရှိရှိပြုလုပ်ထားပြီး အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သော်လည်း တိကျသောအချက်များတွင် စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အခက်အခဲ၏ နယ်ပယ်အပြည့်အစုံကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ADC သည် ဖောက်သည်များအား အချိန်ကိုက်နှင့် အလုပ်၏ နယ်ပယ်တွင် ဖောက်သည်များအတွက် ယင်းကတိကဝတ်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ၎င်း၏အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းမှုများကို အသုံးပြုရန် သဘောတူသော်လည်း၊ ADC သည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အာမမခံနိုင်ပါ (အပိုဒ် 13 ကိုကြည့်ပါ)။
6.2 ADC သည် ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ပြီးနောက် ပရောဂျက်တစ်ခု လုပ်ဆောင်ရန်၊ စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်လုပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရှိပါသည်။
6.3 အလုပ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ နယ်ပယ်အား အပြောင်းအလဲများကို ADC စီမံခန့်ခွဲရေးထံ စာဖြင့်ရေးသားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ site ရှိ ADC ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မဟုတ်ဘဲ၊
6.4 ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း ပါ၀င်ပါက အစီရင်ခံစာကို အများဆုံး hard copy တစ်ခုဖြင့် ထုတ်ပေးရမည် (တစ်အုပ်လျှင် £200 ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် တောင်းဆိုနိုင်သည်) နှင့် အင်္ဂလိပ်လို အစီရင်ခံစာ၏ အပြည့်အ၀ချိတ်ဆက်ထားသော CD မိတ္တူ လေးစောင်၊ ဘာသာစကား။
7.1 ADC သည် Client မှ ပံ့ပိုးပေးသော အချက်အလက်အားလုံးကို လျှို့ဝှက်ထားရန် သဘောတူသည်၊ မဟုတ်ပါက၊
- ဝန်ဆောင်မှုများမစတင်မီတွင် ယင်းအချက်အလက်များကို ADC မှ သိရှိပါသည်။
– အများသူငှာ ဒိုမိန်း သို့မဟုတ် လူသိများသည်။
- ADC သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ တူညီသောအချက်အလက်များကို ပေးသည် သို့မဟုတ်
- Client မှ ၎င်း၏လျှို့ဝှက်ချက်လိုအပ်ချက်မှ ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ်
- ဖောက်သည်အား ADC နှင့် စာချုပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ဥပဒေတရားရုံး (အကောင့်မှ ငွေပေးချေခြင်းမဟုတ်ခြင်းအပါအဝင်) သို့မဟုတ်၊
- သုံးနှစ်ကျော်သွားပါပြီ၊ ဘယ်ဟာက ပိုစောလဲ။
7.2 Client သည် ADC အဆိုပြုချက်(များ)၊ အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံ၊ အခကြေးငွေများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ADC ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်၊ ဒေတာ၊ ကိရိယာများနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အားလုံးကို လျှို့ဝှက်ထားရန် သဘောတူသည်။
7.3 ADC သည် Client မှ ADC သို့ ပံ့ပိုးပေးသော ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပရိုဂရမ်များ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများအားလုံးကို တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ရန် သဘောတူပြီး ၎င်းတို့ကို တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် ပရောဂျက်ပြီးစီးပါက ဖောက်သည်ထံ ပြန်လည်ပေးပို့ရန် သဘောတူသည်။ သို့ရာတွင်၊ ADC သည် ရံဖန်ရံခါ ဝတ်ဆင်မှု သို့မဟုတ် မျက်ရည်ပေါက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ခိုးယူမှုများအတွက် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါပစ္စည်းအားလုံးကို Client ၏ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားရမှုဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သောတန်ဖိုးများအတွက် ADC မှ လက်ခံထားသော မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုအတွက်မျှ တာ၀န်မရှိပါ။
8 ။ အဆိုပါလိုင်း၏တာဝန်ဝတ္တရား
8.1 ဖောက်သည်သည် ADC ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် မည်သည့်ပုံစံတွင်မဆို ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်ပြီး တိကျကြောင်း သေချာစေပြီး ၎င်းတွင်ပါရှိသော အကြောင်းအရာများအတွက် Client မှ တစ်ဦးတည်း တာဝန်ရှိကြောင်း သေချာစေရမည်။
8.2 Client သည် စက်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ရုံပိုင်ရှင်များနှင့်/သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူများကို အကြောင်းကြားရန်ဖြစ်သည်-
က) ADC သည် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေစဉ် သို့မဟုတ် အပြီးတွင် ၎င်းတို့၏ စက်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် စက်ရုံများ၏ ပျက်ယွင်းမှုနှင့် ချို့ယွင်းမှုများအတွက် တာဝန်မရှိပါ။
ခ) စမ်းသပ်မှုသည် စက်ပစ္စည်းများ၊ အဆောက်အအုံ၊ ဝန်ထမ်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် အခြားပါတီအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့် လည်ပတ်မှုကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ရန် ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါက စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ဆေးမှုများကို ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
8.3 ဖောက်သည်သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည် ဒေသတွင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ဥပဒေများနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်နှင့် ၎င်းတို့သည် ကျန်းမာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဘေးကင်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ အခွန်များ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစသည့် နယ်ပယ်အားလုံးတွင် ဤဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေရမည်။
8.4 ဖောက်သည်သည် ADC ဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် တစ်ဦးချင်းက ပရောဂျက်ပြီးနောက် ဆယ့်နှစ်လတာကာလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ကို လက်ခံပါက၊ ဖောက်သည်သည် ၎င်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ သုံးလလစာပမာဏဖြင့် ADC ရှာဖွေသူ၏အခကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းတိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ခန့်ထားမှု စာချုပ်တွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုအပိုဒ်တစ်ခုရှိသည်။
8.5 ADC ဝန်ထမ်းသည် နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူမဟုတ်ပါက Client သည် ADC ဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသောအခါတွင် စက်ရုံသို့ အလည်အပတ်သွားရောက်သော ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ ADC ကိုယ်စားလှယ်အား Client ဝန်ထမ်းများ တတ်နိုင်သည်နှင့် တူညီသောပုံစံဖြင့် Client မှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအားလုံးကို ပြုလုပ်ရပါမည်။
9. အကျိုးဆက် ဆုံးရှုံးမှု
9.1 ADC သည် Client သို့မဟုတ် Client Indemnified Parties များအတွက် တာဝန်မကင်းပါ နှင့် Client သို့မဟုတ် Client Indemnified Parties များသည် ထုတ်လုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အသုံးပြုမှုဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှု၊ အမြတ်နှင့် မျှော်မှန်းထားသည့် တောင်းဆိုချက်များအတွက် ADC တွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အမြတ်အစွန်းများ၊ လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အခြားသွယ်ဝိုက်သောဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ADC ၏ စွမ်းဆောင်မှုရလဒ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အကျိုးဆက်များသည် ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အားကိုးရန်ကြိုးပမ်းနေသည့် ပါတီ၏ ပေါ့ဆမှုတွင် အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်သော်လည်း အကြောင်းမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ သဘောတူညီချက်ပါ အခြားနေရာများတွင် ဆန့်ကျင်ဘက် ပြဋ္ဌာန်းချက်များရှိသော်လည်း၊ Client သည် ADC မှ Client group နှင့် သို့မဟုတ် Client Indemnified Party မှယူဆောင်လာသော မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို ADC ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ လျော်ကြေးပေးပြီး ကိုင်ဆောင်ထားရမည်။ အခြားလက်မှတ်ရေးထိုးသူနှင့်/သို့မဟုတ် အခြားသူ၏အမှုထမ်းများ၏ အမှား သို့မဟုတ် ပေါ့ဆမှု။
10.1 ADC သည် ဝန်ထမ်းနှင့် ကန်ထရိုက်တာများအားလုံးကို ဤပစ္စည်းများကို သိထားသရွေ့ ADC သို့ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သရွေ့ Client ၏ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များကို ကာကွယ်သည့် စည်းကမ်းချက်များဖြင့် အလုပ်ခန့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ADC မှ အာမခံပါသည်။
10.2 Client ထံမှရရှိသည့်ငွေပေးချေမှုမှန်သမျှတွင် ADC မှပြင်ဆင်ထားသည့်အရာအားလုံးအတွက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အားလုံးကို စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မရေးသည်ဖြစ်စေ ADC ၏ မူပိုင်ခွင့်နှင့် ဖြန့်ဖြူးပိုင်ခွင့်များကို ADC မှ ယင်းအခွင့်အရေးများကို အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်မှတပါး၊ ဤအခွင့်အရေးများကို အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်မှတပါး၊ သက်ညှာခြင်း သို့မဟုတ် ADC နှင့် Client အကြား အတိအလင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်နေရာ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းအား ADC မှ ထောက်ခံအတည်ပြုထားသည့်နေရာသို့ စာဖြင့်ပေးပို့ခြင်း။
10.3 ADC သည် ယခင်စာပိုဒ်အောက်တွင် ၎င်း၏ရာထူးကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ ADC မှ ပေးအပ်ထားသော အစီရင်ခံစာများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို လွတ်လပ်စွာကူးယူရန် သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများကို Client မှ ရာနှုန်းပြည့်တာဝန်ပေးထားသည့် အလုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ADC မှ ပေးအပ်ထားသော hard သို့မဟုတ် soft copy တွင် အဆိုပါအခွင့်အရေးကို ပေးအပ်သည်။ မိတ္တူများသည် ဖောက်သည်၏ သီးခြားအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပရောဂျက်အတွင်း၌သာ သီးသန့်ရှိပြီး အစီရင်ခံစာ တွေ့ရှိချက်များကို လက်ခံသည် မှာ Client မှ တာဝန်ပေးအပ်သည့် ပရောဂျက်အတွက်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။
10.4 ဤအပိုဒ်သည် နောက်ဆုံး Client အစီရင်ခံစာနှင့် တင်ပြချက်အားလုံးအပါအဝင် အစီရင်ခံစာအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဖောက်သည်အတွက် ADC မှ ပြုလုပ်သော တင်ပြချက်မှန်သမျှ၏ အသံ၊ ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ADC လေ့ကျင့်ရေးများအားလုံးကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။
10.5 Client ၏အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ ADC ပစ္စည်းမိတ္တူများကို ဖြန့်ဝေခွင့်သည် ADC မှဝယ်ယူထားသော Client ပေါင်းများစွာနှင့် ပြင်ပတွင်ရှိသော စျေးကွက်သုတေသနအစီရင်ခံစာများနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအထိ အကျုံးမဝင်ပါ။ အတွင်းပိုင်းဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ၏ နောက်ထပ်မိတ္တူများကို ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် ရနိုင်ပါသည်။
10.6 ဤအပိုဒ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖောက်သည်များ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ADC သို့ ဖောက်သည်မှ ပံ့ပိုးပေးသည့် မည်သည့်ပစ္စည်းများကိုမဆို ADC စောင်မမှုဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ထားမှု ကတိကဝတ်ဖြင့် ဖောက်သည်၏ကိစ္စရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် တစ်စုံတစ်ရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းအားလုံးကို ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကာအကွယ်ပေးထားသည်။
11.1 ADC အဆိုပြုချက်များနှင့်/သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များနှင့် စာချုပ်များသည် ၎င်းတို့သည် "ပုံသေစျေးနှုန်း" (ဆိုလိုသည်မှာ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း၊ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ကြိုတင်ညှိနှိုင်းထားသည့်အခကြေးငွေအတွင်း ထည့်သွင်းမည်) သို့မဟုတ် သဘောတူထားသည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်များအပြင် စရိတ်စကများကို စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် "နှုန်းထားများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ" နှုန်းထားများ။ ဤကဏ္ဍတွင် မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်များကို တောင်းဆိုမည်နည်းနှင့် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စံမူဝါဒ၏ ရှင်းလင်းချက် ပေးပါသည်။
11.2 သဘောတူထားသည့် နှုန်းထားများသည် အလုပ်ရက်များ၊ ခရီးသွားရက်များနှင့် အစီရင်ခံစာကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ နှုန်းထားများသည် အသားတင်ဖြစ်ပြီး GST/VAT အပါအဝင်၊ အခွန်ရှောင်သည်။ ဖောက်သည်သည် ပြေစာပမာဏမှ ဒေသဆိုင်ရာအခွန်များကို ဆိုင်းငံ့ထားရန် လိုအပ်ပါက Client သည် ADC သို့ အကြောင်းကြားရန် တာဝန်ရှိပြီး နှုန်းထားများကို တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကျုံးဝင်သော ကုန်ကျစရိတ်များကို စုစုပေါင်း ပြေစာတန်ဖိုးဖြင့် သုံးစွဲသူထံ ကောက်ခံပါသည်။ ADC မှ ယင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်ဖြစ်စေ ADC အား ပေးဆောင်ရမည့် အရောင်းအခွန်များ (သို့မဟုတ် အလားတူဘဏ္ဍာရေးခွန်များ) အပါအဝင် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
11.3 VAT (နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာအခွန်များ) ကို ပြေစာပေးသည့်အချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်နှုန်းထားဖြင့် ပြေစာပမာဏသို့ ပေါင်းထည့်မည်ဖြစ်သည်။
11.4 ADC ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့နေရပ် အနီးဆုံး ADC ရုံးသို့ ထွက်ခွာပြီး Client ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ မစတင်မီနှင့် ဖောက်သည်၏ ဝန်ဆောင်မှုများ မစတင်မီတွင် ADC ဝန်ထမ်းများမှ ၎င်းတို့၏ နေရပ်ဌာနသို့ ထွက်ခွာပြီးနောက် သဘောတူညီထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်သည့်ရက်စွဲတွင် နှောင့်နှေးပါက၊ လူတစ်ဦးလျှင် တစ်ရက်လျှင် နှုန်းပြည့် Client အား ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ADC ဝန်ထမ်းများသည် ပရောဂျက်တွင် အသင့်အနေအထားရှိနေပါက သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ သို့မဟုတ် နေရာသို့ ပို့ဆောင်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့်ရက်များရှိပါက၊ နေ့စဥ်နှုန်းထားမှာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
11.5 ပြေစာများကို လစဉ်ပုံမှန်အားဖြင့် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ပြီးစီးပြီးနောက် ပုံမှန်အားဖြင့် ပြသပါမည်။ ADC သည် ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် စုဆောင်းနေသောကုန်ကျစရိတ်အဆင့်ကို ထင်ဟပ်စေရန် ပြေစာများကို မကြာခဏတင်ပြရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
11.6 သက်ဆိုင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ပါက ADC ကိုယ်စားလှယ်မှ အခြား Client များအတွက် တူညီသောဧရိယာတွင် လုပ်ဆောင်သည့် အလုပ်အတွက် ဗီဇာကုန်ကျစရိတ်နှင့် ခရီးသွားစရိတ်များကို မျှဝေပေးပါမည်။
11.7 ဤနေရာတွင် ADC သည် Client အား ကြိုတင်သတိပေးချက်မရှိဘဲ ဖောက်သည်များ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် "ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော" ခရီးသွားစရိတ်များ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း) ပေးဆောင်ရန် အခွင့်အာဏာရှိသည်။ Client သည် ၎င်းတို့အား ကုန်ကျစရိတ်အပြင် ကိုင်တွယ်ခ 10% ဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် သဘောတူပါသည်။
ADC သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဗီဇာ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသော်လည်း ADC ဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံအတွက် ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရှိရန် ခရီးသွားလာရန် လိုအပ်ပါက အဆိုပါရက်များကို အလုပ်ရက်နှုန်းအတိုင်း ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်များကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
b ADC ကိုယ်စားလှယ် (များ) ၏ အိမ်မှ အလုပ်ဆိုက်သို့၊ အလုပ်ခွင်နှင့် အိမ်ပြန်ရန်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် အငှားကား သို့မဟုတ် ခရီးမိုင်စရိတ်များအပါအဝင် အခြားကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အသုံးစရိတ်များအားလုံးကို Client မှ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
c "ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော" ခရီးသွားစရိတ်များသည် ၎င်းတို့၏အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက် နိုင်ငံတကာကော်ပိုရေးရှင်းများအတွင်း ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးချသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ခရီးသွားလာမှုတွင် ကျင့်သုံးသည့် မတူညီသောစံနှုန်းများကို ထင်ဟပ်စေရန် ကွဲပြားပါသည်။ သရုပ်ဖော်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၊ ၎င်းတို့တွင် Business Class International လေကြောင်းခရီး၊ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကိစ္စများအတွက် သင့်လျော်သော ဟိုတယ်တစ်ခုအတွင်း နေရာထိုင်ခင်း၊ နေရာထိုင်ခင်းနှင့် မတော်တဆ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဟိုတယ်၏ စားသောက်ဆိုင်အတွင်း ဖောက်သည်ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်နေစဉ် အစားအသောက်များ အားလုံး သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်း အဆောက်အအုံနှင့် ညီမျှသော အဆင့်၊ ပထမတန်း မီးရထားခရီး၊ တက္ကစီနှင့် ကားငှားရမ်းခ တစ်ဝက်စာ - အရွယ်အစား သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှု အရွယ်အစားအလိုက် ယာဉ်အမျိုးအစား။ အခြေအနေများနှင့် သင့်လျော်ပါက ADC သည် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ခရီးသွား အမျိုးအစား ကွဲပြားခွင့်ကို လက်ဝယ်ရှိပါသည်။
d ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို (အထက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း) စုစုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအချိန်အတွက် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဖောက်သည်၏ဝုဏ်အတွင်း သို့မဟုတ် အလုပ်တည်နေရာသို့ ခရီးသွားခြင်းအပါအဝင်၊
e နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုန်ကျစရိတ်များကို ငွေတောင်းခံသည့်နေ့၏ အမှန်တကယ် ငွေလဲနှုန်းဖြင့် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
f ADC ကိုယ်စားလှယ်များသည် လက်တွေ့ကျသည့်နေရာတိုင်းတွင် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ပြေစာများရယူရန် လိုအပ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီကို သဘောတူခြင်းမရှိပါက ပြေစာတွင် မိတ္တူများပါ၀င်ပါသည်။
12.1 Client သည် အဆိုပြုချက်/ စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသော ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များဖြင့် ချည်နှောင်ရန် သဘောတူသည်။ အခြား သဘောတူထားသည့် ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များ မပါရှိပါက ကြိုတင်ငွေပေးချေသည့် သင်တန်းဝန်ဆောင်မှုများမှလွဲ၍ ပြေစာ၏ ရက်စွဲမှ ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း ပြေစာအားလုံးကို အပြည့်အ၀ ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။ ပြေစာရက်စွဲပြီးနောက် 45 ရက်အတွင်း ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါက၊ ပြေစာ၏လတိုင်း သို့မဟုတ် တစ်လ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် ပြေစာ၏ပမာဏပြည့်ကျော်ကျော်လွန်ပါက အတိုးလေးရာခိုင်နှုန်း (4%) ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
12.2 ဝန်ဆောင်မှုအမိန့် သို့မဟုတ် စာချုပ်အမိန့်ကို အတည်ပြုပြီး proforma ငွေတောင်းခံလွှာကို အတည်ပြုပြီးမှသာ အစီရင်ခံစာကို ဖောက်သည်ထံ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
12.3 အကယ်၍ Client သည် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ADC သည် နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာများပေးပို့ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆင်မပြေမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
12.4 ပေးချေမှု၏ငွေကြေးကို Client အဆိုပြုချက်/စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပြေစာများ/ငွေပေးချေမှုများအားလုံးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းကိုလက်ခံရန် နှစ်ဖက်သဘောတူသည်။
12.5 တစ်ဦးချင်းသဘောတူစာချုပ်က အတိအလင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက၊ စာချုပ်သက်တမ်းအတွင်း မည်သည့်ငွေလဲနှုန်းအတက်အကျကိုမှ အကောင့်တစ်ခုမှ ယူဆောင်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ ပါတီတစ်ခုစီသည် နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်စေ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ သုညနှင့် ငါးရာခိုင်နှုန်းကြား ကွဲလွဲမှုကို ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်တာဝန်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လက်ခံသည်။ အတက်အကျ 5% ထက်ကျော်လွန်ပါက ADC သည် ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်အရ၊ ဤအတက်အကျအတွက် လျော်ကြေးပေးရန် နှုန်းထားများကို အထက်သို့ ချိန်ညှိနိုင်သည်။
12.6 ဖောက်သည်၏တာဝန်မှာ ADC သို့ သဘောတူညီထားသည့် ပမာဏအပြည့်ပေးချေရန်ဖြစ်သည်။ Client သည် ADC မှ ပေးချေထားသော ငွေပမာဏအားလုံးကို လက်ခံရရှိရန် (ထိုကဲ့သို့သော ဘဏ်မှ လွှဲပို့ခြင်းကဲ့သို့သော) ကျသင့်ငွေများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် ငွေပေးချေမှုအားလုံးကို ချိန်ညှိရန် သဘောတူပါသည်။ ဖောက်သည်သည် ADC မှနုတ်ယူထားသော ပမာဏအားလုံးကို ပြန်လည်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကို လက်ခံပါသည်။
12.7 ဖောက်သည်သည် ပြေစာတွင်ဖော်ပြထားသော ဘဏ်တည်နေရာသို့ ကြေးနန်းလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့် ငွေပေးချေရန် သဘောတူသည်။ ADC သည် ကြိုတင်သဘောတူထားခြင်းမရှိသော ဤပမာဏအတွက် Client အမျိုးအစားကွဲလွဲမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုန်ကျစရိတ်များကို ပြန်လည်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
12.8 Client သည် ADC သို့ ငွေပေးချေမှုအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်နိုင်သော မူရင်းမည်သည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်စေ အစိုးရအခွန်များနှင့် တာဝန်များအားလုံးကို ပေးဆောင်ရန် သဘောတူပါသည်။ အကယ်၍ Client နှင့် ADC သည် မတူညီသောနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်နေပါသည်။ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးများကို ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် ပါတီတစ်ခုစီတွင် တာဝန်ရှိသည် (ဥပမာ VAT သို့မဟုတ် အရောင်းခွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍)။
12.9 ADC သည် သဘောတူထားသည့်အချိန်ဇယားအတိုင်း ငွေပေးချေမှုများကို အချိန်မီမပြုလုပ်ပါက Client ကိုယ်စား အလုပ်အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤဆိုင်းငံ့ထားမှုသည် ပြီးစီးသည့်အချိန်ဇယား သို့မဟုတ် ဖောက်သည်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးအပေါ်တွင် သက်ရောက်နိုင်သည့် ဆိုးရွားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမှန်သမျှသည် ဖောက်သည်၏တစ်ဦးတည်းတာဝန်ဖြစ်သည်။ ဤအခွင့်အရေးသည် ကြွေးကျန်စာချုပ်အတွက်သာမက ဤစာချုပ်များကို ကြွေးကျန်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ Client နှင့် အခြားစာချုပ်များတွင်လည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။
12.10 အထူးသဖြင့်၊ ပရောဂျက်တစ်ခု၏ ပေးချေမှုအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို "ကြိုတင်" ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီထားရာ၊ ငွေပေးချေမှုကို အမှန်တကယ်မရရှိမချင်း ဖောက်သည်၏ကိုယ်စား အလုပ်စတင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဖောက်သည်များ သတိပြုသင့်သည်။
12.10 ကျွန်ုပ်တို့၏ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အချက်အလက်တွင် ဖော်ပြထားသော နှုန်းထားများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆိုပြုချက်တင်သွင်းသည့်နေ့မှစပြီး ခြောက်လတာကာလအတွက် သတ်မှတ်ပေးရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တင်ပြသည့် အဆိုပြုချက် တင်သွင်းသည့်နေ့မှ ခြောက်လထက်ကျော်လွန်ပါက ဝန်ဆောင်မှု/လုပ်ငန်း ကြာမြင့်ချိန်သည် ADC ၏ တစ်ခုတည်းသော ဆုံးဖြတ်ချက်အရ၊ ကုန်ကြမ်း၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေအရ ADC မှ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် နှုန်းထားများကို တိုးမြှင့်ရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းများ၊ အလုပ်သမားစရိတ်များ (တရားဝင်အလုပ်သမားညွှန်းကိန်းများကို ကိုးကား၍) နှင့် အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များကို ဤနေရာတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကြောင့် တိုက်ရိုက်နှင့်/သို့မဟုတ် မလွဲမသွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည် (သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်)။ ADC သည် အဆိုပြုထားသော နှုန်းထားများ တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက် တစ်လထက်မနည်း ကြိုတင် အသိပေးရမည်။
13. အကြံဉာဏ်ပေးဆောင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးမှုအတွက် တာဝန်ယူမှု
13.1 ADC သည် သတင်းအချက်အလက်၊ အကြံဉာဏ်၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို သစ္စာရှိရှိနှင့် ထိုအချိန်က ရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များနှင့် တွေ့ရှိမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်း၏ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားအားထုတ်မှုအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ADC သည် စာချုပ်အောက်တွင် ၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားအားလုံးကို ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုများကို အထူးဂရုတစိုက် လုံ့လစိုက်ထုတ်ကာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ရန် ADC ဝန်ထမ်းများအား စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသော၊ ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။ ဝန်ဆောင်မှုများသည် အမှားအယွင်းမရှိ၊ ၎င်းတို့သည် ပေးထားသောရလဒ်များရရှိစေရန်၊ ၎င်းတို့သည် Client ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည် သို့မဟုတ် Client မှမျှော်မှန်းထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သင့်လျော်ကြောင်း ADC မှ အာမမခံနိုင်ပါ။
13.2 ADC သည် အစီရင်ခံစာများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများတွင် ပေးထားသည့် အချက်အလက်များ၏ တိကျမှုကို အာမမခံနိုင်သော်လည်း ADC သည် ၎င်း၏ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကို အသုံးပြုသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် သို့မဟုတ် နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်သည့်အခါ အကြံဉာဏ်ကို လက်ခံခြင်း ရှိ၊ ADC သည် ဤအချက်အလက်၊ ထင်မြင်ချက်နှင့် အကြံဉာဏ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဖောက်သည်တစ်ဦး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်၏ အကျိုးဆက်များအတွက် မည်သည့်အခါမျှ တာဝန်ခံမှုကို လက်မခံပါ။ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ။
14.1 ADC သည် Client ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Client သည် Client ဖြစ်သည် (သို့) Client ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကို လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်နိုင်ပြီး ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူသိရှင်ကြားပစ္စည်းများတွင် Client ၏အမည်ကို အသုံးပြုရန်။ ADC သည် Client အတွက် ဆောင်ရွက်သော အလုပ်အမျိုးအစားကို ယေဘူယျအားဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။
14.2 တာဝန်ပေးထားသောအလုပ်၏ရလဒ်များကို Client မှကိုးကားဖော်ပြသည့်အခါ၊ ADC မှ ဤအခွင့်အရေးကို ပြတ်သားစွာ စွန့်လွှတ်ထားမှလွဲ၍ မည်သူက ဤအလုပ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေရန်အတွက် Client မှ ADC အား ဂုဏ်ထူးဆောင်ကိုးကားရန် သဘောတူပါသည်။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ထိုထုတ်ကုန်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် လွန်လွန်ကဲကဲ စီးနင်းနိုင်သော အနေအထားဖြစ်လင့်ကစား (အပိုဒ် 10.2 ကိုကြည့်ပါ)။
15.1 ဝန်ထမ်းများ၏အပြုအမူ၊ ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေး၊ အစီရင်ခံစာများ သို့မဟုတ် ADC ၏ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် တိုင်ကြားချက်မှန်သမျှသည် အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြီးသည့်နောက် တစ်ပတ်အတွင်း ADC သို့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော စာဖြင့် ရေးသားတင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ADC သည် ADC ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒအရ ဤကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်သည်။ တိုင်ကြားချက်သည် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမျှ ဆိုင်းငံ့ထားမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ် ပါတီများ၏တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုခုကို အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
16. စာချုပ်နှင့် တာဝန်များ ကုန်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်ပြားခြင်း။
16.1 ADC နှင့် Client အကြား စာချုပ်ပါတာဝန်ဝတ္တရားများကို ပုဒ်မ 16.2 နှင့် သို့မဟုတ် 16.3 ၏အခြေအနေတွင် အလေးအနက်သုံးသပ်ပြီး ချိန်ညှိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
16.2 ADC သည် အခကြေးငွေ နှင့် အသုံးစရိတ်များ အပြည့်ဖြင့် ပြန်လည်ရယူရန် အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာကို ဆိုင်းငံ့မထားဘဲ ဖောက်သည်ထံမှ ပြေစာများ ကျန်ရှိနေသောအခါတွင် ADC သည် ၎င်း၏ လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရန် သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
16.3 ADC သည် Client အတွက် အလုပ်အားလုံးကို ချက်ခြင်းရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိရမည်- ဒေဝါလီခံရန်အတွက် Client ထံ အသနားခံစာ သို့မဟုတ် ပျက်ပြယ်ကြောင်းကြေညာခြင်း သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲရေးလက်ခံသူအဖြစ် ထားရှိခြင်း သို့မဟုတ် ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ငွေတောင်းခံလွှာများကို ပေးဆောင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
16.4 အထက်ပါအခြေအနေများတွင် ADC သည် ADC လက်ဝယ်ရှိ Client ၏ ကုန်စည်နှင့် ပစ္စည်းအားလုံးအပေါ် ယေဘုယျအားဖြင့် ဝန်ခံခွင့်ရှိပြီး ထိုကဲ့သို့သော ကုန်စည်နှင့် ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ရန် 14 ရက်သတိပေးချက်ပြီးနောက်၊ ADC ယူဆသည့်စျေးနှုန်းများဖြင့် အဆိုပါကုန်စည်နှင့် ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ရန် သတိပေးချက်ကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။ Client မှ ADC သို့ ဖောက်သည်များမှ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နိုင်သည့် ကြွေးမြီများအတွက် ဤရရှိငွေများကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်။
17.1 ADC သည် Client ကိုယ်စား မည်သည့်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများကိုမျှ ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်လိုအပ်ချက်မဆို စာချုပ်ကို ပျက်ပြယ်စေမည်ဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မည်သည့်သဘောတူညီချက်ကိုမဆို ADC သည် ၎င်း၏အခကြေးငွေနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ အပြည့်ဖြင့် ပြန်လည်ရယူခွင့်ရှိသည်။
17.2 Client သည် ADC မှ ပံ့ပိုးပေးသည့် မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို တရားမဝင်အသုံးပြုခြင်းမပြုရန် သဘောတူပါသည်။
18 ။ တာဝန်ဝတ္တရားများကန့်သတ်
18.1 စာချုပ်ပါ အခြားနေရာများတွင် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ကန့်သတ်ချက်များကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ၊ ADC ဘက်မှ တာဝန်ယူမှုမှာ Client နှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးထက် သေးငယ်သည်နှင့် အာမခံအကျုံးဝင်မှု အများဆုံးအထိ၊ .
18.2 ADC သည် GBP £1,000,000 (GB Sterling ONE MILLION) ၏ ယေဘုယျ တာဝန်ယူမှုအာမခံ ကာမိလျော်ကြေးပေးဆောင်ပါသည်။
19 ။ အင်အားစု Majeure
19.1 Force Majeure ဆိုသည်မှာ ပါတီတစ်ခုခု၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ထိန်းချုပ်မှုထက် ကျော်လွန်သည့် မည်သည့်အရာမဆို ဖြစ်ပွားခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤကဲ့သို့သော အဖြစ်အပျက် သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်သည့်အတိုင်းအတာအထိ အဆိုပါအဖွဲ့အပေါ် ချမှတ်ထားသည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ နှောင့်နှေးခြင်း၊ ဟန့်တားခြင်း သို့မဟုတ် ဟန့်တားခြင်းမျိုး၊ အဆိုပါအဖွဲ့သည် အဆိုပါတာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများ၊ ကျန်းမာရေးကာကွယ်မှုအစီအမံများ၊ လူမှုရေးမငြိမ်သက်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ၊ လုံခြုံရေးအစီအမံများ၊ စစ်ပွဲ၊ မီး၊ ပျံ့ပွားမှု၊ ဖောက်ခွဲမှုများ၊ ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုများ၊ သို့မဟုတ် ကြိုတင်မှန်းဆမရနိုင်သော တရားဝင်အရာရှိများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ နှောင့်နှေးခြင်း၊ တားဆီးခြင်း သို့မဟုတ် တားဆီးခြင်း အစိုးရအစီအမံများနှင့် အခြားသော ရှောင်လွှဲ၍မရသော နှင့် မမြင်နိုင်သော အဖြစ်အပျက်များ သို့မဟုတ် အခြေအနေများ ပြောင်းလဲခြင်း (အပိုဒ် 6.2 ကိုကြည့်ပါ)
19.2 စာချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက် အလုံးစုံ သို့မဟုတ် သိသာထင်ရှားစွာ ပျက်ဆီးသွားသည့် နှောင့်နှေးမှု သို့မဟုတ် သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ပြင်ပမှ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အဖြစ်အပျက်များကြောင့် နှောင့်နှေးခြင်းသည်၊ စီမံကိန်း၏ ကျန်ရှိသော အပိုင်းကို ပယ်ဖျက်ရန် နှစ်ဖက်စလုံးမှ ဤအခြေအနေများတွင် ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင် ADC သည် Force Majeure စတင်ချိန်မှ ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အခကြေးငွေများအားလုံးကို ပြန်လည်ရယူခွင့်ရှိသည်။
20. တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၊ စာချုပ်ဥပဒေ
20.1 နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှ အခြားနည်းဖြင့် မဆုံးဖြတ်ပါက ADC နှင့် Client အကြား ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စာချုပ်ကို စကော့တလန် ဥပဒေများနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်ပြီး တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
20.2 အထက်ဖော်ပြပါ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အဆိုပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် အဆိုပါ ယေဘုယျအခြေအနေများဖြင့် အုပ်ချုပ်သော သဘောတူညီချက်များ သို့မဟုတ် စာချုပ်များ သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်များ သို့မဟုတ် စာချုပ်များ ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော အငြင်းပွားမှုများ သို့မဟုတ် အရေးဆိုမှုများတွင်၊ ADC နှင့် Client တို့သည် စကော့တလန်တရားရုံးများ၏ သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မဟုတ်သော အငြင်းပွားမှုတစ်ခုခုကို တင်ပြရန် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုချက်ကို သဘောတူပါသည်။
20.3 ပါတီများသည် ဤအငြင်းပွားမှုကို အသိအမှတ်ပြုထားသော သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုထားသော ခုံသမာဓိအဖွဲ့သို့ တင်ပြရန်လည်း ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
20.4 ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ၎င်းတို့ကို အခြားဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်ဆိုပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားမှုများ သို့မဟုတ် ကွဲပြားမှုရှိပါက မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းသည် လွှမ်းမိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။